संसारकै जोखिम माउन्ट केटु चढेका कामिरिताको नयाँ रेकर्ड २२ औं पटक सगरमाथा आरोहण
Wednesday, 22 May, 2019 | ८ जेष्ठ २0७६ , बुधबार
काठमाडौं । हिम आरोही कामिरिता शेर्पा २२ औं पटक सगरमाथा शिखर चुम्न सफल भएका छन् । बुधबार ८ बजेर ३० मिनेटमा सगरमाथामा नेपाली झण्डा फहराउन सफल भए ।
पासाङल्हामु गाउँपालिका– ५, थामे सोलुखुम्बुका ४८ वर्षिय कामिरिता अब संसारको अग्लो शिखरमा सबैभन्दा बढी पाईला राख्ने आरोही बनेका छन् । २१ अौ‌ं पटक आरोहण गर्नेमा उनीसहित तीन जना थिए । आपा शेर्पा र फुर्वा टाशी शेर्पाको नाममा २१ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेको विश्व कीर्तिमान छ ।
पर्यटक गाइड पासाङ निमा शेर्पाले कामिरिता साहशी र हिम्मतिला आरोही भएको प्रतिक्रिया दिए । आधार शिविरबाट आरोहण थालेको चौथो दिन उनी शिखरमा पुगेका हुन् । सन् १९९२ आरोहण थालेका कामिरिता १९९४ मे १३ २४ वर्षको कलिलो उमेरमा पहिलोपल्ट सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भएका थिए ।
सन् २०१२ मा रोप फिक्सिङ गरेर फर्किएपछि चौथो शिविरबाट विदेशी टोलीलाई चुचुरोमा पुर्‍याएका थिए। तर उनले त्यसवर्ष दुईपटक आरोहण गरेको प्रमाणपत्र पाएनन्। उनले ८ हजार मिटरको ५ वटा हिमाल चढिसकेका छन्। संसारकै जोखिमपूर्ण भनिएको पाकिस्तानको माउन्ट केटु सन् २०१४ मा आरोहण गरे । त्यसैगरि ल्होत्से, चोयु र मनास्लु चढिसकेका छन्।
आप्पा पछि खुम्जुङका फुर्वाटासी शेर्पाले २१ पटक नै सगरमाथा चढेका थिए । आप्पाले सन् २०११ बाटै आरोहण छोडे। फुर्वाले सन् २०१३ बाट छोडे । त्यसपछि निरन्तर बढी पटक आरोहण गर्ने कामिरिता एक्ला आरोही हुन् ।
उनले २९ सदस्यीय टोलीका साथ अमेरिकन ट्राभल कम्पनीमार्फत आरोहण गरेका हुन् ।
प्रकाशित २ जेष्ठ २0७५ , बुधबार | 2018-05-16 11:20:27
एकै हप्तामा दुई पटक सगरमाथा चुमे कामीरिताले
काठमाडौं । कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा २४ औं पटक सगरमाथा शिखर चुम्न सफल भएका छन् । २३ पटकसम्म सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर रेकर्ड
सगरमाथा आरोहणको ढोका खुल्दैः ल्होत्से
काठमाडौं, वसन्त ऋतुको यो याममा ल्होत्से हिमालको आरोहण शुरु भएको छ । इमाजिन नेपालको आरोही समूहले (ल्होत्से–८,५१६ मिटर) हिमालको आज बिहान
हेलिकोप्टर दुर्घटनमा पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा सवार सबैको मृत्यु
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन सहयोग
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आउनु भएका जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले बिहीबार प्रधानमन्त्री
विमानस्थल विस्तार गर्न २५० बिगाहा
विराटनगर- प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्न
पर्यटकलाई १०० रुपैयाँमा कोठा
बागलुङ । अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन बागलुङ भित्रने पर्यटकले रू. १०० मा होटलको कोठा पाउने भएका छन् । पर्यटक आकर्षित गर्न होटल व्यवसायीले
कांग्रेसको ‘छायाँ सरकार’का मन्त्री को–को
डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप 483.1K
गर्भ तुहाएर छात्रा हत्या गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ 124.6K